खुशीको खबर : पत्रकार रबि लामिछाने दम्पति को'रोना सं'क्रमण मुक्त ! - Onlines Time
November 11, 2020 November 11, 2020 onlinestimeLeaveaComment on खुशीको खबर : पत्रकार रबि लामिछाने दम्पति को’रोना सं’क्रमण मुक्त !
काठमाडौं : लोकप्रिय संचारकर्मी रबि लामिछाने दम्पति को’रोना संक्रमण मुक्त भएका छन । केही बेर अघि मात्र गरिएको दुबै जनाको PCR रिपोर्ट नेगेटिभ आएको रबि लामिछानेले जानकारी दिएका छन् । १४ दिनको कठिन आइशोलेशन बाट आज मुक्ति मिलेको रबि लामिछानेले सामाजिक संजाल फेसबुक मार्फत जानकारी दिएका छन् । उनले विभिन्न माध्यमबाट स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुहुने सम्पुर्णमा धन्यबाद प्रकट गरेका छन् । निरन्तर स्वास्थ्य सल्लाह प्रदान गरिदिनु हुने डाक्टरहरुप्रति आभार प्रकट गरेका छन् ।
उनले फेसबुकमा लेखेका छन्- १४ दिनको कठिन आइशोलेशनबाट आज मुक्ति मिल्यो।केही बेर अघि मात्र हामी दुबैको PCR रिपोर्ट नेगेटिभ आएको जानकारी प्राप्त भयो।विभिन्न माध्यम बाट हामीलाई स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुहुने सम्पुर्णमा एकमुष्ठ धन्यवाद छ। निरन्तर स्वास्थ्य सल्लाह प्रदान गरिदिनु हुने जनस्वास्थ्य विज्ञ डा.रवीन्द्र पाण्डे Rabindra Sameer तथा डा.विश्वनाथ कोइराला(ॐअस्पताल)प्रति आभार प्रकट गर्दछौ।सोचे झै कोरोना रैनछ।
कुकुरलाई इमानदारिताको प्रतीक मानिन्छ । एक कुकुरले आफूलाई यसमा अब्बल प्रमाणीत गरेको छ । उसले आफ्नो मालिकका छोराछोरीको ज्यान बचाउन आफ्नै ज्यान दिएको छ ।
यो घटना अमेरिकाको हो । त्यहाँ फ्लोरिडा राज्यमा एक कुकुरले आफ्ना मालिकका छोराछोरी स र्प बाट बचाउन आफ्नो ज्यान दिएर स र्प को ज्यान लिएको छ ।
पिटबुल प्रजातीको उक्त कुकुरले १० वर्षकी ओरिली रिचार्डसन र ११ वर्षका ओरियन रिचार्डसनको ज्यान जोगाएको हो । बालबालिकाका आमा गिना रिचार्डसनका अनुसार ओरिली र ओरियन घरको अगाडिको आगनमा खेलिरहेका थिए ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
युएसए टुडेका अनुसार, त्यसबेला ११ महिने पिटबुल पनि उनीहरुसँग खेलिरहेको थियो । सोही समयमा स र्प आँगनमा प्रवेश गरेको थियो ।
स र्प ले कुकुरलाई ४ पटक टो के पछि कुकुरले स र्प को शिर नै का टि दिएको जनाइएको छ । उक्त कुकुर बे हो स भएपछि पशु अस्पताल तत्काल लगिएको थियो ।
तर त्यस बेलासम्म ढिला भइसकेको थियो । कुकुरको ज्यान जोगिएन । कुकुर म रे पछि ओरिली र ओरियन दुवै धरधरी रोएको आमा गिना रिचार्डसनले बताएकी छिन् ।
September 9, 2021 onlinestime